Ngaphambi ukufunda indlela ukupheka isobho ka carp, kwakungeke ubuhlungu uqala ukuzibuza ukuthi kuyini nokuthi kulokho izinhlanzi ukulungele. Futhi uma esiliva carp ikhanda efanelekayo ukulungiswa isobho okumnandi nokunomsoco.
Lihunyushwe kwelesiHeberu elithi izindlela Indo-European "umhluzi". Lokhu dish lasendulo cuisine Russian. Kwakuvamise ukuba wamukeleke iyiphi isobho ngokuthi isobho. Kodwa manje inhlanzi amafutha kuphela igama. Ngakho, incazelo ephelele yaleli umqondo wethu yile: ecacile kancane astringent bagxila izinhlanzi umhluzi.
Indlebe okunxanelekayo ukulungiselela eyodwa, kunokuba amaningi izinhlanzi izinhlobo. Ngokuphambene, inhlanzi isobho, akuzona zonke izinhlobo zayo efanelekayo ekuwulungiseleleni. Sebenzisa lezo izinhlobo kabani inyama ngesisa, gooey, ukunambitheka sweet. Lokhu kungahlali herring, roach, bream, eyikati, njll izinhlanzi zasolwandle ekhethwayo, kanye whitefish, perch, isiphika, njll Isimo esibaluleke kakhulu yilesi: .... Fish kumele ibe fresh. Kungcono ukuthatha eziphilayo.
Lokhu izinhlanzi angenasawoti, kodwa inani fat akuyona kunabayeni kolwandle. Carp inyama emnandi ithenda. Kuyinto unothile ngamavithamini futhi ungumthombo ephelele amaprotheni. Kabanzi kokudla wezokudla. Ukusebenzisa kwakhe njalo kunciphisa inani cholesterol egazini. Kulabo abakhetha ukupheka isobho carp wabanjwa ngezandla zakhe, kubalulekile ukwazi ukuthi kungenzeka ukubamba engxenyeni yokuqala ka-May kuya kwesigamu Septhemba yesibili.
Indlebe we carp ikhanda - simnandi kakhulu, flavorful nesitsha nokwanelisayo. izindlela eziningi. Ngakho-ke, njengoba kubasalele ukwethula ezinye zazo, futhi leso sinqumo isivele phezu by umfundi.
Recipe № 1: ne ukwengeza ezinamaphiko nezingcwecwe imisila
Ukulungisa isobho zezinhloko ezimbili kanye imisila carp (ungase futhi wengeze amaphiko Imi), thina, okokuqala kunakho konke, udinga ukususa gills kanye uxubha kahle abandayo amakhanda amanzi angcolile kanye imisila ngaphansi. Kulahleni epanini ngamanzi abandayo bese ubeka phezu ukushisa eliphezulu.
Nakuba okuqukethwe pan uqala ubilise, kubalulekile ukuba kucace we ikhasi anyanisi ezimbili, geza Chop fake. Ezintathu noma ezine amazambane tuber futhi sihlanza engahashazanga futhi uthathe cubes. Uma amanzi kuziwa ngamathumba izinhlanzi amakhanda, umlilo kudingeka ukubambezela futhi uqhubeke upheke cishe ihora, kodwa ngesikhathi ukushisa low.
Ngehora ukuthola izinhlanzi aphume epanini ku umhluzi ukubeka anyanisi kanye amazambane upheke kuze ithenda. Lapho imifino Sekukancane, engeza bay leaf, usawoti kanye pepper. Indlebe we carp ikhanda uqhubeke upheke imizuzu 3-5. Khona-ke ukuvala umlilo, uthele likagologo. Khona-ke ukugxambukela bayigubungele nge lid imizuzu 15-20. Fish isobho usulungile. Ukulungele ukukhonzwa.
Ngokuthakazelisayo, lokhu isidlo okuningana okunomsoco futhi navaristym eyatholakala kusukela ekhanda kuka kusukela umucu izinhlanzi.
Indlebe we carp ikhanda bafuna:
2 carp ikhanda (futhi imisila futhi amaphiko);
20-30 amagremu likagologo;
bay leaf, usawoti, pepper;
1.5 amahora nokulungiselela.
Indlebe carp amakhanda - inombolo iresiphi 2
Indlela yesibili lihlukile kwalokho lokuqala izaqathe, semolina futhi uphizi abamnyama.
Futhi uma othize, bese namanje ukususa gills kusuka ekhanda, ngokucophelela, ngizomlonda yeka ngamanzi abandayo futhi agqoke umlilo onamandla. Uma amanzi amathumba, inciphise umlilo uqhubeke upheke, kodwa ihora ezingaphezu kweyodwa, iresiphi lokuqala, ingqikithi imizuzu engu-20. Inqobo nje uma ikhanda ukupheka, ukuhlanza, geza nquma eyodwa onion, omunye isanqante and amazambane 3-4. Izaqathe kanye lungakuthonya on a grater. Ngaphambi ukubeka imifino umhluzi, kufanele kube usawoti kanye pepper. Manje, engeza ngamunye ngamunye: amazambane, lapho cishe ngomumo, uanyanisi ne isanqante ogayiwe. Uma isanqante inqanyulwa ngommese, wasibeka kanye amazambane. Imifino ukupheka imizuzu 10. Manje ngeza 3 tbsp semolina - imizuzu 5, futhi manje sekuyisikhathi ukugcwalisa isidlo nge emnyama bay leaf - 3-4 imizuzu. Khona 40-50 amagremu likagologo, uthele endlebeni yakho bese uvala isitofu. Vala lid uvalwe futhi ushiye sokunika imizuzu embalwa. Indlebe we carp ikhanda ilungele ukukhonzwa.
Kuzo zombili lezi iresiphi, ungakwazi ukwengeza dill, parsley. Imifino kunikeza umbono omuhle nelesitsha. Kodwa abalandeli ukunambitheka zezinhlanzi isobho imifino ingase nje kubonakale engadingekile. Ujabulele ukudla kwakho.
Indlela ukubhala iphepha ngokwesayensi? Indlela lenze futhi lishicilele iphepha ngokwesayensi?
Analog eshibhile "UYasmin": ukubuyekezwa kodokotela kanye neziguli